Waa maxay macnaha kalsoonida kalsoonida? Fiiri qeexida Lexicon Financial
Jimcaha Febraayo 28, 2020
Start daymaha -Leaks amaah Trust
1 Waa maxay kalsoonida kalsoonida?
2 Saddexda ciyaaryahan ee soo socda ayaa qayb ka ah ganacsiga amaahda
2.1 Yaa bixiya deyn aamin ah?
2.2 Waa maxay faa'iidooyinka deymaha fidmadu?
2.3 Waa maxay kalsoonida kalsoonida loo isticmaalo?
2.4 Sidee loo bixiyaa lacag bixinta?
Waa maxay kalsoonida kalsoonida?
Marka la barbardhigo amaahda caadiga ah, waxaa jira hal amaah Trust saddex ka mid ah jilayaasha waaweyn. Amaahda aamminsan waa nooc ka mid ah deynta oo ay sameeyaan jilaa saddexaad. Wakiilku guud ahaan waa shirkad bangi ama caymis oo hubiya hab dhaqanka habboon ee ganacsiga amaahda. Laakiin dawladu waxay kaloo qaadan kartaa shaqadan. Deynka macaamilka ayaa sidoo kale loo yaqaan kareedh joogtada ah sababta oo ah wakiilka ma bixinayo deyntii, laakiin wuxuu dhigi doonaa kaliya dhicitaanka.
Saddexda ciyaaryahan ee soo socda ayaa qayb ka ah ganacsiga amaahda
Dhanka kale, Doonta, oo ka dhigaysa caasimadda la heli karo. Bangiyada gobolka ama gobolka ayaa sida caadiga ah ka shaqeeya ilaha. Deeq-bixiye aad uwanaagsan ayaa ah Kramstalt für Wiederaufbau (KfW).
Markaas wakiilku, oo mas'uul ka ah maaraynta habboon iyo quudinta qaybood daahsan oo xiiso iyo iyaga u gudbin doonaa in trustor ah.
Jilaa saddexaad waa, dabcan, amaahiyaha. Lacagta waxaa sidoo kale lagu dalbadaa deynta caadiga ah. Codsadayaashu waxay noqon karaan shakhsiyaadka gaarka ah iyo shirkadaha.
Yaa bixiya deyn aamin ah?
Jarmalka, deymaha aaminaadda ayaa laga furi karaa dhammaan bangiyada. Gaar ahaan Volksbank-Raiffeisenbanken iyo bangiyada kaydka ayaa loo yaqaan adeegga. Maadaama ay haystaan ​​wacyigelin heer sare ah oo bulshada dhexdeeda ah, waxay kordhinayaan guud ahaan kor u qaadista bulshada. Bangiyada badankood waxay bixiyaan amaah amaah ah oo deyn ah. Mustaqbalka milkiilayaasha hantida maguurtada ah, tusaale ahaan, waxay sidoo kale leeyihiin deyn xaqiiqo ah oo lagu daro. Sidaas, bangiga iyo wakiilku waxa kale oo faa'iidada bixinta credit dhaqanka oo ay heshay dalab amaah ah trust macaamiisha cusub.
Waa maxay faa'iidooyinka deymaha fidmadu?
Caymiska macaamilka wuxuu bixiyaa wakiilka faa'iidada uu leeyahay khatarta credit maadaama uu u matalayo magaca saddexaad. Sidaa darteed masuuliyadda ayaa ku habboon oo kaliya in si toos ah loo wareejiyo deynta iyo farsamooyinka farsamada ee deynta.
Tani waxay si fudud ugu fiicantahay bangiyada iyagoo ah wakiilada maaddaama ay kaliya maamusho amaahda. Maadaama mashaakilku uu bixinayo caasimadda, amaahdu maaha culeyska khayraadka Baanka.
Dammaanadda Dammaanadda oo kale ah ayaa sidoo kale qiimo leh, maadaama aysan khasab ku ahayn inay bixiso khayraadkeeda maamuleed. Inkasta oo uu ku dhejiyo ceymiska deynta iyo bixinta kharashka wakiilka, waxay ka yaryihiin maamulkiisa deynta.
Laakiin xitaa amaahda, amaahdaas waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido leh. Ugu dambeyn, shuruudaha ayaa ka hooseeya sicirka suuqa.
Waa maxay kalsoonida kalsoonida loo isticmaalo?
Ujeedada deynta raasumaalka ah ayaa badanaa horay loo dhigaa, waxaana ku qoraa wakiilka. Xaaladaha badankood maaliyaddu waxay ka timaaddaa barnaamijyo kabadan oo leh siyaasad bulsho ama asaas dhaqaale. Isticmaalka hadda jira waxaa ka mid ah tallaabooyinka badbaadinta tamarta (tusaale, dhirta photovoltaic), dhiirigelinta qoyska ama dhismaha guryaha.
Sidee loo bixiyaa lacag bixinta?
Markaad bixiso deyn aamin ah, waxaa jira fursado kala duwan. Mararka qaarkood wakiillada waxay bixiyaan qadarka buuxa isla markiiba, marmarka qaar xitaa qayb ahaan qayb ahaan. Tusaale ahaan, dhibcaha daraasadda daraasadda bixiya, sida caadiga ah, waxaa lagu bixiyaa oo keliya qayb ahaan. Sidoo kale marka la eego deynta ganacsiyada, lacag bixinta mushaharka ayaa ah mid aan caadi ahayn.
Bixinta deymaha aaminaadda ayaa ah lacagta guud ee dadweynaha, taas oo ay ku ansixiyaan wakiilka. Sababtan awgeed, dawladuhu waxay sidoo kale isticmaalaan amaahda lagu kalsoon yahay si kor loogu qaado horumarinta bulshada. Ujeeddooyinka ayaa ah, tusaale ahaan, bartilmaameedka horumarinta dhaqaalaha gobolka, dhaqaale lagu maalgaliyo kaabayaasha bulshada, iyo sidoo kale horumarinta iskii u shaqeysiga iyo abuuritaanka ganacsi.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo faa'iido leh fiidiyowga soo socda. Noocyada kale ee muhiimka ah ee credit ayaa la soo bandhigayaa.
Maqaalka horekhatarta credit